jeudi, 28 mars 2019 08:46
Parlemanta: Nihena ny fahatokisan’ny vahoaka ny olom-boafidy
Araka ny vokatra navoakan’ny CSI (Komity mitandro ny fahamarinana) dia nihena ny fahatokisan’ny vahoaka ny olom-boafidy, kanefa ny Parlemanta dia fototra iray iorenan’ny rafitra ara-piarahamonina mendrika.
Nisy ny atrik’asa momba ny famolavolana rafitry ny toe-tsaina sy fihetsika mendriky ny parlemantera izay niarahan'ny Antenimiera roa tonta tamin’ny CSI sy ny ministeran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, izay natao tao amin’ny Hôtel Colbert Antaninarenina-Antananarivo ny 26 sy 27 martsa 2019, atrik’asa novatsian’ny PNUD (Fandaharanasan’ny Firenena Mikambana momba ny Fampandrosoana) vola.
jeudi, 28 mars 2019 08:42
Sambava: Fiara nirimorimo nifatratra tany anaty tranon'olona
Omaly alarobia 27 mars tamin'ny 6ora maraina no nitranga ny loza teto amin'ny Fokontany Soavinandriana, Kaominina ambonivohitra Sambava, raha nitsoaka fiara citerne ity minibus manao zotra rejionaly ity.
Toeram-pivarotana enta-madinika no simba. Niparitaka ny entana, ary nisy nanararaotra nangalatra.
Tsy nisy aina nafoy, zaza 11 taona sendra namafa tokontany no voadona.
Nitsoaka ny mpamily taorian'ny loza, natahotra fitsaram-bahoaka.